Hlola iMonaco - World Tourism Portal
Yini ukubona. Izindawo ezihamba phambili eziphezulu eMonte
Okufanele ukwenze eMonaco
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yaseMonaco
Bukela ividiyo ekhuluma ngeMonaco
Hlola iMonaco izwe elincane elwandle lweMedithera futhi luzungezwe France, yize i-Italian Riviera isendaweni engamakhilomitha ambalwa kude nasempumalanga. Lesi yisimo sesibili esincane esizimele emhlabeni (ngemuva kwe Vatican) futhi cishe iyedolobha ngokuphelele.
Monte Carlo akuyona inhloko-dolobha yaseMonaco kepha iyisifunda sikahulumeni. Njengoba zingenayo imithombo yemvelo yokuxhaphaza enye indawo ngaphandle kwendawo yayo nesimo sezulu, ubumbano buye baba yindawo yokuvakasha yezivakashi nendawo yokuthela yamabhizinisi. IMonaco iphindwe kasithupha ubukhulu be Vatican nezwe elizimele kakhulu elinabantu abaningi emhlabeni.
Yize engeyona ilungu le-European Union noma i-European Economic Area, iMonaco igcina umngcele ovulelekile kanye nezinhlangano zamasiko neFrance futhi iphathwa njengengxenye yendawo yeSchengen. Zombili iziphathimandla zaseFrance naseMonégasque zenza amasheke echwebeni laseMonaco naseHeliport.
Isitembu sepasipoti yesikhumbuzo siyatholakala ehhovisi lezokuvakasha likazwelonke. Lesi sitholakala e2a Boulevard des Moulins, enyakatho yensimu ngaphesheya kweKhasino. Isikhathi sempelasonto sifushane.
Isikhumulo sezindiza esiseduzane yiNice Côte-d'Azur International, ebangeni elingamakhilomitha e40 kude nesikhungo sedolobha eliseduze neFrance.
IMonaco ifinyelelwa yimingcele yomhlaba wayo kusuka eFrance noma Italy yenethiwekhi yemigwaqo emikhulu, esetshenziswa kakhulu kuyo yi-A8 egijima isuka entshonalanga isuka eMonte Carlo iye eNice kanye eMarseilles, nasempumalanga ubheke emngceleni wase-Italy. Qiniseka ukuthi ubheka imijikelezo yomgwaqo ejwayelekile lapho usondela futhi ushiya iMonaco.
Phakathi kweNice neMonaco, kubuye kube neminye imigwaqo emithathu ebabazekayo: iBasse Corniche (Low Coast-Road - Highway 98), ngasolwandle, iMoyenne Corniche (Middle Coast Road - Highway 7), edlula e-Eze-Village, kanye naku IGrande Corniche (Umgwaqo Omkhulu Wogu), edlula eLa Turbie neCol d'Eze (Eze Pass). Zonke ngemisakazo emihle enikeza ukubukwa okumangazayo ngaphezulu kogu lolwandle. Ukuthola ukwelashwa okukhethekile, qasha imoto yemidlalo eguqukayo kusuka ezinsizeni eziningi eziqashisayo zezindiza bese uthatha i-French Riviera ngesitayela.
Ukuhamba kuyindlela enhle kakhulu yokuhamba ngeMonaco; Kodwa-ke, kunezindawo ezithile, njenge-Exotic Gardens, ezidinga ushintsho olukhulu ekuphakameni ngakho-ke zenzele izintaba ezinzima. Kukhona nabagibeli abaphezulu abayisikhombisa abaphakamayo kanye nama-lifti (onke amahhala) asiza ukuxoxisana emithambekeni yedolobha. Uma uzithola ususondele futhi ufuna ukufinyelela ebhange elingaphesheya kwePort Hercule, funa isikejana esincane esihamba ngezinyawo kuphela esisebenzisa imizuzu eyi-20 noma njalo phakathi nemini; kubiza i-Euro eyodwa kuphela.
Izinkampani ezihamba ngezimoto emhlabeni jikelele zinamahhovisi esikhumulweni sezindiza eNice naseMonte Carlo. Lokhu kufaka phakathi i-Avis, Gare Monte Carlo, i-Europcar neHertz - abashayeli kumele babe nelayisense lokushayela izwe okungenani unyaka owodwa kanti kuvame ukucelwa ukuthi izindleko zikhokhwe ngekhadi lesikweletu lokushayela. Ukushayela enkabeni yedolobha kungesabisa eMonte Carlo ngethrafikhi esindayo - noma kunjalo, kukufanele kaningi lokhu ukushayela eceleni kwezimoto ezibizayo edolobheni! Qiniseka ukuthi ucela imoto ngebhokisi le-othomathikhi uma ungasetshenziswanga ukushayela ibhukwana.
Kunezizwe ezihlukene ze-125 ezihlala eMonaco, yingakho kukhulunywa izilimi eziningi. IsiFulentshi yilona kuphela ulimi olusemthethweni; nokho iMonégasque ilulimi lukazwelonke. IsiNtaliyane nesiNgisi ziyaqondakala futhi zikhulunywa kabanzi.
Ubunqunu beMonaco bunikeza ukulingana okuhle kwezindawo ezithandekayo zomlando nezanamuhla. Kuneminyuziyamu ehlukahlukene nezigodlo ezingavakashelwa kanye nezitolo ezinkulu zezitolo kanye namakhasino. IMonaco iphinde inikeze izindawo zokuphumula ethekwini ngisho nasezintweni ezikhangayo. Kulula ukuhamba Monte Carlo neMonaco uma uzinika isikhathi sokufunda ukuthi ukuphi "ukunqamulela amafushane" ahlukahlukene. Amamephu wedolobha ngokuvamile atholakala kwizindawo eziningi ezidayisa abathengisi nezitolo ngemali encane.
Thatha uhambo ngokuhamba ngeMonaco-Ville, eyaziwa nangokuthi “i-rocher” noma “idwala.” IMonaco-Ville iseyidolobhana lakudala nasendaweni enhle ngokumangazayo. Yakhiwa cishe ngokuphelele imigwaqo yabahamba ngezinyawo nemigwaqo eyedlule futhi iningi lezindlu zangekhulu ezedlule lisale lisale. Kukhona amahhotela amaningi, indawo yokudlela nezitolo eziyizikhumbuzo abavakashi abangahlala, badle futhi bayothenga kuyo. Ungavakashela neSigodlo sePrince, i-Cathedral, i-Oceanographic Museum, iCity Hall, kanye ne-Saint Martin Gardens.
IPalais Princier (iSigodlo sePrince) iku-Monaco-Ville yakudala futhi ikufanele ukuvakashelwa. Kukhona izinkambo eziqondiswa ngumsindo esigodlweni usuku ngalunye futhi zivame ukugijimisa ubusuku nemini. ISigodlo sinikezela ngombono obabazekayo obabazekayo obheke ePort naseMonte-Carlo. Nsuku zonke e-11: I-55 AM, phambi kwesihambeli esikhulu seSigodlo singabuka ukushintshwa komkhosi wokuqapha owenziwe "AbakwaCarabiniers." Ama-Carabiniers "awagcini ngokuphepha kwezokuPhepha kepha amnikeza umqaphi wokuhlonishwa futhi ngezikhathi ezikhethekile, kukhona abahamba naye. I- “Compagnie des Carabiniers du Prince” inebhande lamasosha (abalandeli); owenza ekhonsathini yomphakathi, ngezikhathi ezisemthethweni, imicimbi yezemidlalo kanye nemikhosi yomculo wamasosha omhlaba.
Isonto laseMonaco lakhiwa e-1875 futhi limi esizeni sesonto le-13th yangekhulu lokuqala. Yisonto elihlekisayo le-Romanesque-Byzantine elinikezelwe eSanta Nicolas futhi ligcina izinsalela zePrincess zaseMonaco nePrincess Grace zangaphambili. Isigcawu sesonto siqukethe nezinye zokudlela ezinhle kakhulu zaseMonaco-Ville.
I-Oceanographic Museum ne-Aquarium ingukuheha okudumile emhlabeni. Kutholakale i-279 ngaphezulu kwezinga lolwandle, imnyuziyamu iqukethe amaqoqo amangalisa wezilwane zasolwandle, izinhlobo eziningi zezidalwa zasolwandle (ezazigxishwe noma zisesimweni samathambo), amamodeli wemikhumbi yeLabhoratri yaseMelika, nemikhumbi yezandla eyenziwe ngemikhiqizo yemvelo yolwandle. Phansi phansi, imibukiso kanye nokuqagelwa kwefilimu kwethulwa nsuku zonke egumbini leNkomfa. Esitezi esingezansi, izivakashi zingakujabulela ukubuka imibukiso emangalisayo yezimbali zasolwandle nezilwane. Ngezinhlobo zezinhlanzi ze-4,000 nezinhlobo zemindeni ye-200 yama-invertebrates, i-aquarium manje isiyigunya lokwethulwa kohlelo lwasolwandle lwaseMedithera nolwezindawo ezishisayo zasolwandle. Okokugcina, izivakashi zingadla isidlo sasemini e- “La Terrasse” futhi zivakashele isitolo semyuziyamu. Imali yokungena yi-16 € yabadala. Abafundi bangathola isaphulelo ngokukhombisa i-ID yomfundi evumelekile. Udinga ukuthatha inombolo yebhasi i-1 noma i-2 kusuka esiteshini sesitimela iMonaco Monte Carlo ukuze ufinyelele kuleli dolobha.
IJardin Exotique (i-Exotic Gardens) ingesinye sezingadi eziningi uMonaco okufanele anikele ngazo. Izitshalo eziyinkulungwane ezimbalwa ezingandile ezivela emhlabeni wonke zivezwa kuhambo lokuhamba olukhumbulekayo kakhulu ngokubukwa kanye nezimbali nezitshalo. Iqoqo liyi-cacti iningi, ngakho-ke ungalindeli ukubona izinhlobonhlobo ezibanzi. Ngenxa yokukhuphuka kokuphakama, hhayi nje kuphela ukuthi kunemibukiso eminingi yezitshalo zasogwadule kepha kukhona nezimbukiso ezimbalwa zezitshalo zomhlaba ezingaphansi. Kukhona ne-grotto (umhume) ohlele izinkambo eziqondisiwe. Uhambo (ngesiFulentshi kuphela) luqala ekuqaleni kwehora ngalinye futhi luhlala imizuzu eyi-25. Emhumeni, kuzodingeka ukhuphuke izitebhisi ezilingana nezakhiwo ezizungeze i6. Izindleko zokungena zihamba kancane (€ 8) ngaphandle kokuthi ungaphansi kwe-16 noma ungumfundi (€ 3.50). Udinga ukuthatha inombolo yebhasi i-2 ukuze ufinyelele kulengadi. Ungathatha leli bhasi esiteshini sesitimela noma e-Oceanographic Museum.
ISonto leNhliziyo Engcwele (i-Eglise du Sacré-Coeur) noma iSonto leMoneghetti, elingekude neJardin Exotique, liphakeme njengelinye lamasonto amele ubuciko be-déco eMonaco. Yakhiwa obaba abangamaJesuit base-Italiya abavela e-1926 kuya e-1929 njengendawo engcwele yokuthandaza nokunamathela, imidwebo yayo emangalisayo umdwebi wase-Italy uFranzoni wembula imibala yabo yokuqala emihle emisebenzini yokulungisa ephothulwe e-2015.
ILa Condamine yisifunda sesibili esidala kunazo zonke eMonaco, ngemuva kweMonaco-Ville. Lapha ungamisa futhi umangaze izikebhe eziningi zikanokusho nemikhumbi yokuhamba ngesikebhe evame ukuhlobisa amachweba asemanzini. ILa Condamine iyisifunda sebhizinisi esichumayo lapho ungavakashela khona iMakethe yeCondamine kanye nezindawo zokudla ezingama-rue Princesse-Caroline. Njengoba kunezindawo ezimnandi okwakhiwe ngazo amatshe nezakhiwo zanamuhla, iLa Condamine iyakufanelekela ukuvakashelwa.
IMonaco Opera House noma iSalle Garnier yakhiwa umakhi wezakhiwo odumile uCharles Garnier. Ihholo lendlu ye-opera lihlotshiswe ngombala obomvu negolide futhi linemidwebo neziqoshwe nxazonke zehholo. Uma ubheka phezulu ophahleni lwehholo, isivakashi siyoqhunyiswa imidwebo enhle kakhulu. Indlu ye-opera iyindida kodwa ngasikhathi sinye inhle kakhulu. Kuke kwaba neminye imisebenzi ephezulu kakhulu yamazwe omhlaba ye-ballet, opera namakhonsathi abanjelwe endlini ye-opera isikhathi esingaphezu kwekhulu leminyaka; cabanga ukuthatha umbukiso ngesikhathi sokuvakasha kwakho ... kepha ulindele ukukhokha amadola aphezulu!
I-Marlborough Fine Arts Gallery yasungulwa kuyo London nguFrank Lloyd noHarry Fischer. Kwavulwa igalari yesibili Rome, omunye ku I-New York, nokukodwa ngaphezulu eMonaco. Igalari iphethe iqoqo elihle labaculi bangemva kweMpi Yezwe II futhi imidwebo kaPablo Picasso, uJoan Miró, uJules Brassai, uLouise Bourgeois, uDale Chihuly, uDavid Hockney noHenri Matisse. Ukwemukelwa kumahhala futhi igalari inikezela ngemibukiso yeqembu.
Isithangami saseGrimaldi yisikhungo somhlangano saseMonaco. Iqediwe ngoJulayi 2000, isakhiwo esigcwele ilanga olwandle sinokungena kwengilazi emangalisayo, izindawo zokudlela ezimbili zomhlangano, ihholo le-ballet ne-opera, kanye namahholo amabili emihlangano neminye imicimbi. Isithangami sinikela namahholo amabili wemibukiso amakhulu angasetshenziselwa imibukiso yezohwebo noma eminye imibukiso. Futhi ibanga elifushane lokuhamba ukusuka emahhotela aseduze.
Ukuqoqwa kwezimoto zakwaPrince kwanoma yimuphi umdlandla wezimoto, kuyindawo okufanele uhambe kuyo, kukhona konke, kusukela ezimotweni nasezimotweni ezindala, ukuya ezimotweni zomjaho i-formula 1.
Luckry inhlanhla yakho ku-Grand Casino nokugembula eceleni kwezicebi zomhlaba futhi ezivame kakhulu ukuduma. Uzodinga ipasipoti yakho ukuze ungene. Ungavakashela futhi amakhasino ngaphandle kokugembula, kodwa futhi ngemali ekhokhwayo. Ikhodi yokugqoka ngaphakathi iqinile kakhulu
Izindiza zeScicic: jabulela iMonaco neFrance Riviera ezungeze phezulu ngokuvakasha okuhle kwendiza enophephela emhlane.
Imigwaqo yaseMonaco ibamba iFomula 1 Grand Prix eyaziwa kakhulu. Futhi kungenye yezindawo ezivelele zenhlalo yabantu baseYurophu kulo nyaka. I-Automobile Club yaseMonaco ihlela lo mjaho omangalisayo weFomula 1 unyaka ngamunye. IGreat Prix ingamakhilomitha angama-78 ezungeza amakhilomitha ama-3.34 emigwaqweni iMonte Carlo emincane futhi eyisontekile. Ukuheha okukhulu kweMonaco Grand Prix ukusondela kwezimoto ezihamba ngejubane leFomula One kubabukeli bomjaho. Ukuthokozela kwezinjini zokukhalaza, ukubhema amathayi nabashayeli abazimisele nakho kwenza iMonaco Grand Prix ngenye yemijaho ejabulisa kakhulu emhlabeni. Kukhona izihlalo ezingaphezu kuka-3,000 ezitholakalayo ezithengiswayo kwisekethe. Izakhamizi zaseMonaco zivame ukuqasha izindawo zazo zomcimbi. Ngesikhathi sokuphumula, kungenzeka ukuthi uzungeze isekethe. Amamephu amahhovisi wabavakashi anendlela ebhalwe ngokucacile kumamephu abo, yize abazinikelayo bengazidingi! Kulabo abangakwazi ukukukhokhela, ungathatha uhambo lokugibela ithrekhi emotweni esebenza.
Isikebhe sokudoba: Thola iMonaco olwandle phakathi naloluhambo lwesikebhe oluthakazelayo! “I-Aquavision” isikebhe sohlobo lwe-catamaran esifakwe ngamawindi amabili endaweni yokubuka ngaphansi kwamanzi, ngaleyo ndlela sivumele abagibeli ukuba bahlole ulwandle olungokwemvelo lolwandle ngendlela engajwayelekile. Isikebhe singathatha abantu abangama-120 ngohambo ngalunye.
I-Azur Express: Izitimela zabavakashi ezijabulisayo zenza izinkambo zansuku zonke eMonaco. Uzovakashela iMonaco Port, iMonte-Carlo kanye namaPalace ayo, amakhasino adumile nezingadi zawo, idolobha elidala laseCity Hall bese ekugcineni iSigodlo Senkosi. Izimvo zibhalwe ngesiNgisi, i-Italy, isiJalimane nesiFulentshi. Lolu hambo olujabulisayo luhamba cishe imizuzu eyi-30.
Ngesikhathi sasehlobo, uMonte-Carlo ukhanyiselwa ngamakhonsathi akhazimulayo eMonte-Carlo Sporting Club ekhethekile. Le kilabhu ifake umculi onjengoNatalie Cole, Andrea Bocelli, Abafana Basebhishi, uLionel Richie noJulio Iglesias phakathi kwabanye. Iklabhu futhi ibamba amakhasino amancane afaka imidlalo eyisisekelo yamakhasino. Akekho ongaphansi kweminyaka engu-18.
Ngenkathi uhlala eMonaco, ungathatha uhambo lwezinsuku ezigcwele (noma uhhafu wosuku-uhambo, noma ngabe uthanda) ezindaweni eziseduze njenge France kanye ne-Italy. IMonaco ixhunywe eFrance ngemigwaqo emikhulu ngakho-ke ukuqasha imoto kungaba yindlela engcono kakhulu yokuhamba. Ungathatha futhi "isitimela esibhidi" noma ibhasi eya emadolobheni aseYurophu aseduzane naseMonaco kufaka phakathi Paris, UNice noVentimiglia.
Amashadi we-Yacht eMonaco athandwa kakhulu futhi kunezinkampani eziningana ezingakwazi ukuhlela uhambo ngesikebhe esincane, i-yacht esikebhe noma esikebheni esikhulu se-yach yach.
IMonaco nezindawo ezizungezile zinhle futhi nesifunda futhi ikakhulukazi amaKhasino adume ngokuba yi-mecca yezimoto zokunethezeka, ezinjengeFerraris, iLamborghinis neBentleys. Omunye umsebenzi othandwa kakhulu izivakashi eziya eMonaco ukuqasha imoto kanokusho amahora ambalwa noma usuku lokujabulela imigwaqo egudla ugu.
Thola isitembu iMonaco kwiphasiphothi yakho esikhungweni semininingwane yabavakashi. Kumahhala.
IMonaco ine-euro (€) njengemali yayo yodwa.
Ukuthenga ku Monte Carlo imvamisa ikhethekile futhi empeleni ayindawo yeholide lesabelomali. Kunezindawo eziningi zokuncibilikisa ikhadi lesikweletu eceleni kwama-roller aphezulu ase-Europe. Izitolo zezingubo ze-chic zikwiGolden Circle, efakwe yi-Avenue Monte Carlo, Avenue des Beaux-Arts ne-Allees Lumieres, lapho iHermes, uChristian Dior, uGucci noPrada bonke benobukhona. Indawo ne-ndawo eyindawo i-Indawo du yekhasino yikhaya labasebenza ubucwebe bokugcina abade njengeBulgari, Cartier neChopard. Uzothola, noma kunjalo, ukuthi iningi labavakashi lizomane lijabulele ukuzulazula kule ndawo nokuyothenga emafasiteleni, noma ngabe ungathengi lutho. Amahora ejwayelekile wokuthenga asuka ku-9AM kuya ku-3PM ukuya kwi-7PM.
Ukuthatha okuthe xaxa okuthe xaxa ukuthenga eMonte Carlo, zama iMakethe yeCampamine. Imakethe, etholakala ku-Place d'Armes, ibikhona kusukela ku-1880 futhi inempilo futhi iyabukeka - amahora amaningi angachithwa ngokumane uzulazule, ukutholela izikhumbuzo ezitolo ezinkulu ezincane, izindawo zokuphumula kanye nezindawo ezinobungane. Uma, noma kunjalo, izinketho zakho zokuthenga zingezesimanje kakhulu, vele uthathe uhambo olufushane e-esplanade uya e-rue Princess Caroline pedestrian mall.
IFontvieille Shopping Center nayo iyisipiliyoni sokuthenga ”esijwayelekile nezitolo zakwa36 ezithengisa izinto zekhompyutha, ama-CD, ifenisha kanye nezingubo kanye nesuphamakethe yakwaCarrefour neMcDonald's. Ihhovisi lezivakashi libuye likhiphe umhlahlandlela wokuthenga wamahhala owusizo edolobheni.
Ungahamba kanjani? Ukudla eMonaco kuhamba kahle emhlabeni jikelele. Kunezindawo zokudlela eziningi ezinhle, eziqala ngeCafe de Paris ngaphesheya komgwaqo usuka ekhasino, ezindaweni zokudlela ezinamanzi eceleni kwePort de Fontvieille. Ezinyangeni zasebusika, uzothola izindawo zokudlela ezizohliswa ngentengo efanele- eMonaco. IBouillabaisse ihamba kahle lapha.
Iminyaka esemthethweni yokuphuza / yokuthenga utshwala i-18 futhi isebenza ngokuphelele.
I-Champagne inesimo sesiphuzo sikazwelonke eMonaco. Ingilazi eyodwa ingabiza u- $ 40 endaweni yokudlela yemfashini!
Uma ukwabhajethi, iMonaco akuyona indawo enhle kunazo zonke. Isibonelo, ihhotela lezinkanyezi ezimbili ngaphandle kwesidlo sasekuseni kanye nendawo yokugezela kuzobiza cishe nge- € 60 ngomuntu ngamunye. Inketho engcono ukuhlala kwelinye lamadolobha amaningi ngaphandle kweMonaco.
Abasebenzi besikhungo sezokuvakasha eMonaco nabo bazohlala phansi bashayele izingcingo ukusiza ukuhamba ngezinyawo ekutholeni indawo yokuhlala. Noma ucela indawo yokuhlala “eshibhile”.
IMonaco yindawo ephephile kakhulu, engenacala, futhi inamaphoyisa aqinile. Eqinisweni, kunesikhulu esisodwa samaphoyisa kubo bonke abantu be-68, okusho ukuthi iMonaco inamaphoyisa amakhulu kakhulu nobukhona bamaphoyisa emhlabeni zombili endaweni ngayinye. Yonke indawo yomphakathi igcwele amakhamera, futhi noma yiluphi uhlobo lokuphazamiseka lungakhiqiza ngokushesha kanye nokufika kwezikhulu eziningi.
Ukuphela kwesikhathi okufanele uqaphele kuso phakathi kweviki leFomula One Grand Prix, elibhekwe kabanzi njengoMjaho weF1 owaziwa kakhulu. Ukuletha izinkulungwane zezivakashi, umcimbi ubeka iMonaco igcwele kakhulu phakathi nosuku. Ngenxa yalokhu, kube nokukhula okuphawulekile kwamaphakethe ekuqaleni konyaka womcimbi.